Mirongatra tanteraka ny valanaretina: miisa 79 ireo nifindran’ny Coronavirus tao anatin’ny roa andro | NewsMada
Mirongatra tanteraka ny valanaretina: miisa 79 ireo nifindran’ny Coronavirus tao anatin’ny roa andro
Haingana be ny fifindran’ny valaretina. Miisa 45 ny tranga vaovao ny 18 mey teo, araka ny tatitry ny CCO. Niampy 34 izany ny 19 mey ka tafakatra 79 ny fitambaran’ireo nifindran’ny Coronavirus, tao anatin’ny roa andro.
Samy nanao ny fitiliana tamin’izany na ny Institut Pasteur (IPM) sy ny laboratoara any Toamasina ary ny CICM eny Ankatso.
Raha tsiahivina, miisa 45 ny tranga vaovao ny talata teo ka avy any Toamasina ny 42 raha avy eto Antananarivo ny telo. Izany hoe samy nanao fitiliana tamin’ny olona miisa 390 ny IPM eto Antananarivo sy ny laboratoaran’izy ireo any Toamasina ka nahitana ny tranga miisa 32. Natao fitiliana teny Avaradoha ny 31 raha iray kosa tany Atsinanana.
Mbola roa ihany ny maty…
Etsy andaniny, nanao fitiliana 127 kosa ny CICM ka nahita tranga vaovao miisa 13 any Toamasina ka avy eto Antananarivo ny telo tamin’izany.
Na izany aza anefa, nahitana olona sitrana miisa 12 tamin’io andro io ka 131 izany ireo nahafeno ny fepetra, afaka nody noho ny fahasitranana.
Ho an’ny alarobia kosa indray, miisa 34 ireo tranga vaovao ka 24 avy any Toamasina ary any Moramanga ny 10. Tsy nisy tranga vaovao teto Antananarivo, ary tsy nisy koa ny sitrana, tamin’io fotoana io. Mbola mijanona ho roa ihany ireo maty.
Foiben’ny coronavirus hatrany ny ao Toamasina…
Tafakatra 405 izany izao ireo tratran’ny Coronavirus hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty eto amintsika. Miisa 272 ireo mbola tazonina eny amin’ny hopitaly ary mbola arahi-maso ny fahasalamany. Iray kosa ahina ny toe-pahasalamany, araka ny tatitra, omaly. Mbola mijanona ho foiben’ny valanaretina coronavirus ny ao Toamasina, miaraka amin’ny any Alaotra Mangoro, Moramanga, araka ireo antontanisa ireo.